musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Toronto to Grenada ndege paAir Canada izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Caribbean • Grenada Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Vanhu vekuCanada vane shungu dzekufamba uye Grenada inotarisira kuti kuchave nekuwanda kwenzendo dzepasirese munguva yechando, kunyanya kunzvimbo dzinodziya dzemamiriro ekunze.
Grenada inogamuchira kudzoka kwebasa remhepo kubva kuCanada kekutanga mugore.
Muna 2019, Grenada yakagamuchira vashanyi veCanada vanosvika 17,911.
Travelbrands ndeye Canadian ine uye inoshanda "super distribution" network inoumbwa neshanu dzekutengesa / online yekufambisa agency brands uye gumi tour operator wholesale brands.
NeSvondo, Gumiguru 31, Grenada akatambira kudzoka kwemhepo kubva kuCanada kekutanga mukati megore. Air Canada ndege 1066, Boeing 737 Max 8, yakabata pasi na2:55 PM. Kapteni John Petropoulos nevafambi zana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe vakakwaziswa neushamwari nemukuru weGrenada Tourism Authority (GTA) Petra Roach, Vatariri Vekushambadzira Renee Goodwin naShanai St Bernard uye mimhanzi yesimbi yepani inorira. Mutyairi wendege nevashandi vakaunzwa nebhuku rakanaka retafura yekofi, Grenada Heritage "Rwendo Rwendokuburikidza Nenzvimbo uye Nguva" uye sarudzo yemachokoreti akagadzirwa munharaunda. Vafambi vakapihwa zvipo zvemabhegi aisanganisira muunganidzwa wezvinhu zvechokwadi zveGrenadian.
Kukurudzira kudiwa kwendege kaviri pasvondo kubva kuToronto, neSvondo neChitatu, GTA yatanga chirongwa chekushambadzira chine hukasha chichishandisa echinyakare, dhijitari, uye magariro enhau mumusika weCanada. Air Canada uye sangano rekufamba, TravelBrands.
The Air Canada mushandirapamwe uchasanganisira, asi haungogumiri, mashandisirwo edhijitari paFacebook peji yavo uye Weather Network pamwe nechikwereti che5,000 Aeroplan mamaira kumutakuri wega wega kubhuka kwekuenda panguva yemushandirapamwe wemavhiki matatu.
Travelbrands ndeye Canadian ine uye inoshanda "super distribution" network inoumbwa neshanu dzekutengesa / online yekufambisa agency brands uye gumi tour operator wholesale brands. Sunquest, Exotik Tours, Holiday House, uye mamwe mabhureki akadai seFunSun Vacations, Boomerang Tours, RedTag.ca uye ALBATours ese aripo pasi peamburera imwe chete, zvichiita kuti TravelBrands ive imba yemagetsi muindasitiri yekufambisa yeCanada.
Mushandirapamwe wavo uchasanganisira kutora kwemavhiki maviri peji rekutanga reRedtag.ca, Deal Alert push notices, banner ads uye vhidhiyo kutumira. Vafambisi vekufambisa vanobhuya zororo kuenda kuGrenada vanogashira kashanu penguva dzese dzekuvimbika panguva yemushandirapamwe.
Mukuru weGTA, Petra Roach akati, "Vanhu vekuCanada vane shungu dzekufamba uye tinotarisira kuti kuchave nekuwanda kwenzendo dzekunze munguva yechando, kunyanya kunzvimbo dzinodziya dzekunze. Saka isu tinofanirwa kuoneka mumusika kuti titore mukana weiyi pent-up yekuda uye chinzvimbo Grenada senzvimbo yakanakira vanhu vekuCanada vari kutsvaga kutiza kubva kunotonhora kuenda kuzororo kunzvimbo yechokwadi. "
Muna 2019, Grenada yakagamuchira vanhu vekuCanada vanosvika zviuru gumi nezvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi neimwe.